राष्ट्रपतिको अफर त्यागेका ठाकुरको भविष्य : नयाँ दल कि विश्राम ? « Kakharaa
राष्ट्रपतिको अफर त्यागेका ठाकुरको भविष्य : नयाँ दल कि विश्राम ?
काठमाडौं । महन्थ ठाकुर कुनै समय तराई राजनीतिको भीष्म पितामह मानिन्थे ।
कांग्रेसका पुराना नेता दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि, शेख इद्रिसले खनेको बाटोमा ठाकुरले आफ्नो गर्विलो इतिहास बनाउनुभएको थियो । कांग्रेससँग असहमति राखेर मधेश केन्द्रित दलको मसिहा यी गान्धीवादी नेता जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टीविहीन बन्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले एउटा पुस्तक लेख्नुभएको छ । पुस्तकको नाम हो, ‘१२ औं नम्बरको खेलाडी’। फुटबल खेलको १२ नम्बरको खेलाडीजस्तै नेपाली राजनीतिका हस्ती ठाकुरलाई समयले त्यही कोटीमा पुर्‍याएको छ ।
राजनीतिमा लागेपछि उहाँले घर बिर्सनुभयो । जीवनको उर्जाशील समय जेल र प्रवासमा बित्यो । ३३ वर्षअघि पत्नी र केही वर्षअघि छोराले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछि पारिवारिक रूपमा पनि उहाँ कमजोर बन्दै जानुभयो । काठमाडौंमा रहँदा छोरीको आश्रयमा बस्नुहुन्छ ।
नेता ठाकुर जति भद्र हुनुहुन्छ, उहाँमा क्रान्ति र विद्रोहको चेत उतिकै छ । सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै अवतार धारण गर्ने मधेशी नेताहरूको आमचरित्र विपरीत उहाँमा शक्ति र सत्ताको मोह छैन ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, मन्त्री र राष्ट्रपतिको निम्तो छोडेर मधेश केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय ७८ वर्षीय ठाकुरको दिनचर्या यो उमेरमा पनि लोभलाग्दो छ ।
जनता समाजवादी पार्टी विवादले कानुनी निकास पाउने क्रममा ५१ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जना उपेन्द्र यादवतिर उभिए । ठाकुर पक्षमा १६ जना मात्र भए ।
बहुमत जुटाएको यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएपछि त्यागको राजनीतिमा आफूलाई समर्पण गरेका ठाकुरको भावी यात्रा कतातिर मोडिने हो ? आम चासोको विषय बनेको छ ।
ठाकुरसमक्ष नयाँ दलको सारथी हुने वा विश्राम लिने दुई विकल्प बाँकी छ । तर यी दुवै बाटो उहाँका लागि सहज भने छैन ।
दुई चरणको चुनाव पार गर्दा पनि कांग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत धमाधम वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन भइरहेको
एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा भीम रावललाई
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले १० बुँदे कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा भीम रावल
हतास र निराश बन्दै ‘प्रचण्ड’, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कहिले ?
काठमाडौं । झण्डै दुई दशकयताको नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल
एमालेको कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाइने सुझाव
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाइने तथा उपाध्यक्ष र सचिव